Hordhac: Kulanka Wales Vs Denmark Euro 2020, Shaxda Iyo Xidigaha Dhaawaca Ah
HomeWararka CiyaarahaHordhac: Kulanka Wales Vs Denmark Euro 2020, Shaxda Iyo Xidigaha Dhaawaca ah
June 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Koobabka Qaramada 0
Xulka Wales ayaa La Ciyaaraya Xulka Denmark Wareega 16-ka ee Euro 2020 Kulan ka dhicidoona Garoonka Johan Cruijff ArenA, Labada Xul ayaa kaalinta labaad kaga soo baxay Guruubyadooda.
Garoonka Johan Cruijff ArenA
Ethan Ampadu ayaa noqon doona maqnaanshiyaha kaliya ee maqnaanaya madaama da, yarka casaan loo taagay kulankii Italy walina wuu ka ganaaxan yahay kulanka.
Ma jiro wax walwal ah uu qabo Macalinka Wales maadaama ay u badan tahay inuu soo celiyo line-upkii uu ku soo bilaabay kulamadii Switzerland iyo Turkey.
Taasi waxay ka dhigan tahay in Kieffer Moore laga yaabo inuu markale soo galo XI, isagoo hor boodaya shaxda 4-5-1.
Denmark ayaa si rasmi ah u waayi doonta Christian Eriksen, kaasoo sii waday soo kabashadiisa ka dib markii laga soo saaray cisbitaalka, laakiin Hjulmand ayaa heli doona ciyaartoy kale oo muhiim ah.
Lama heli karo: Christian Eriksen
Midkoodna 10-kii kulan ee ugu dambeeyay ee dhexmara Wales iyo Denmark tartamada oo dhan midkoodna ma dhammeysan, iyadoo Wales ay badisay afar ka mid ah lixdii kulan ee Denmark. Tani waa kulankii ugu horreeyay ee ay labadan koox kulmaan tan iyo bishii Nofeembar 2018, iyadoo Denmark ay ku badisay 2-1 ciyaar ka tirsaneyd Nations League.
Danmark ayaa badisay mid kasta oo ka mid ah seddexdii kulan ee ugu dambeysay oo ay wajahdo Wales, taasoo soo bilaabatay June 1999. Kani waa kulankii ugu horreeyay ee dhexmara labada koox tartan weyn.
Wales ayaa laga badiyay labadii kulan ee ay hore ugu ciyaareen Amsterdam, waxaa ka badiyay Netherlands bishii September 1988 (0-1) iyo June 2014 (0-2).
Danmark ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay ee taariikhda koobka qaramada yurub ee u soo baxda wareega bug-baxda tartanka iyada oo laga badiyay labadii kulan ee ugu horeeyay ee wareega Group-yada. Kani waa markii ugu horreysay oo ay kasoo muuqdaan heerarka dambe ee tartanka tan iyo 2004, markii ay guuldarro 3-0 kala kulmeen Czech Republic wareega quarter-finalka.